रक्सी बनाउने कच्चा पदार्थ महुवाको फूल टिप्न जंगलमै बास, औषधिको काम गर्ने विश्वास - Ektm news
Home›स्वास्थ्य›रक्सी बनाउने कच्चा पदार्थ महुवाको फूल टिप्न जंगलमै बास, औषधिको काम गर्ने विश्वास
रक्सी बनाउने कच्चा पदार्थ महुवाको फूल टिप्न जंगलमै बास, औषधिको काम गर्ने विश्वास
धनगढी, ८ बैशाख–महुवा प्रजातिको रुखको फूल संकलनको लागि कैलालीको ग्रामीण भेगका स्थानीय थारु समुदायका मानिसहरु जंगलमै बास बस्ने गरेका छन् ।
रक्सी उत्पादनको लागि कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गरिने महुवाको फूल संकलनको लागि जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वनहरु स्थानीय बासै बस्न थालेका हुन् । एक सातायता उनीहरु दिनरात नभनि जोखिम मोलेरै भएपनि महुवाको फूल संकलन गरिरहेका छन् ।
कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–६ लम्बीफाँटाकी ८० वर्षीया बृद्धा मनटुन्नी देवी थरुनीले प्रत्येक वर्ष चैत र वैशाखमा महुवाको फूल संलकन गर्नु आफूहरुको संस्कार जस्तै भएको दाबी गरिन् । आफूहरुको बाजेबजैदेखि महुवा संलकन हुँदै आएको बताउँदै उनले आजभोलि आफ्नो दिनचार्य नै महुवा संकलनको कार्य भएको उल्लेख गरिन् ।
लम्बीफाँटाका अर्का स्थानीय ८० वर्षीइ रतिलाल चौधरीले घरको भाले बासेपछि नजिकैको वनदेवी सामुदायिक वन, गणेशगौरी सामुदायिक वनमा महुवा संकलनको लागि पस्ने गरेको जानकारी दिए ।
उनले भने–‘गाउँमा भन्दा आजभोलि जंगलमा चैनार (रमाइलो) हुन्छ । कलुवा (विहानको खाना) खाने काम समेत जंगलमै हुन्छ ।’
स्थानीयका अनुसार थारु समुदायमा महुवाको फूललाई प्रशोधन गरी बनाइएको रक्सीलाई विशेष रुपमा लिने गरिएको जनाइएको छ । विशेष पूजा, कार्यक्रम तथा चाडपर्वमा महुवाको रक्सीको प्रयोग हुने थारु अगुवाहरु बताउँछन् ।
भजनी नगरपालिका–६ महादिउलीका भल्मन्सा (मुखिया) कालीराम चौधरीले थारु समुदायमा महुवाको रक्सीलाई देउतालाई चढाउन प्रयोग गरिने बताए । उत्पादित रक्सी सुगन्धित र औषधीको काम गर्ने समेत भल्मन्सा चौधरीले जिकिर गरे ।
स्थानीयहरु महुवाको बोटलाई आफ्नो भनी संरक्षण गर्दै आएको बताइन्छ । भजनी रेञ्ज पोष्ट स्तरीय सामुदायिक वन समन्वय समितिका अध्यक्ष विजयराज श्रेष्ठले महुवा संकलकहरु महुवाको बोटलाई मेरो÷तेरो भनेर पुर्खौदेखि संरक्षण गरी फूल बटुल्दै आएको बताए । फूल फूल्ने समयमा बोटको वरिपरी सरफाई गर्दै आएको बताउँदै उनले फूल फूल्ने अवधीभरी बोटलाई कुर्दै आएको जनाए ।
झरेको फूल संकलन गरी औषधीवद्र्धक रक्सी उत्पादन गर्नुले कुनै सामाजिक र प्राकृतिक सम्पदामा हानी नोक्सानी नपु¥याउने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।
तर स्थानीय जनप्रतिनिधीले रक्सी बनाउनकै लागि महुवा संकलन गर्नुको कुनै फाइदा नभएको ठोकुवा गरे । उनीहरुले मदिराकै कारण घरेलु हिंसा, महिला हिंसालाई मलजल पुगेको बताएका छन् ।
कैलारी गाउँपालिका–६ का वडा अध्यक्ष प्रेमबहादुर चौधरीले महुवा बहुउपयोगी वनस्पति भएपनि यसलाई रक्सी बनाउने कार्यले विकृतिको जरोको रुपमा स्थापित गरेको बताए ।
महुवा संकलन गरी मदिरा बनाउने कार्यले व्यक्ति, परिवार, समाजलाई कुनै फाइदा नहुने भएकोले समय सापेक्षा गलत परम्परा र संस्कारलाई सुधार गर्नु पर्ने सुझाए ।
महुवा संकलनमा महिलाहरुकै वढी सहभागिता हुने गरेको बताउदै उनले भने–‘यहि संस्कारकै कारण समाजमा घरेलु हिंसा, महिला हिंसाले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । एकातिर महुवा संकलकहरुबाटै वनमा डढेलो लगाउने कार्य हुँदै आएकोले वन विनाश हुने, अर्कोतिर जंगली जनावरहरुको बासस्थानमा असर पुग्ने र जंगली जनावरको जोखिम पनि भएकोले सचेत जरुरी छ ।’ lokaantar
राजधानीको ठमेलबाट पेस्तोल र गोलीसहित २० वर्षीय ...
यी हुन् संसारकै अपत्यारिलो यौनांग भएका १० ...
घरमा श्रीमती छँदैछे नि भनेर ढुक्क नहुनुस करुणा कुँवर ,मनोविद १ मिनेट समय निकालेर सबैले पढ्नुहोस !
अब जंगलमा पाइने जुकाको मूल्य आकासिने यस्तो छ संकेत, जुकाको चुसाइबाट जटिल रोगको यसरी उपचार हुँदै !
डण्डिफोरबाट हैरान हुनुभएको छ, यी काम गर्नुस्…
पुदिनाको बारेमा एति ठुलो भ्रम ?खादा ओखती कि बिस ?एक पटक सबैले पढ्नुहोस
फर्सीको मुन्टामा हुन्छ यस्ता गुण, जानौँ यसका फाइदाबारे…
यस्ता महिलालाई हुन्छ पाठेघरको मुखको क्यान्सर : लक्षण, अवस्था, रोकथामका उपाय
संसारकै लामो कपाल भएकी युवती जसको लम्बाई ५५ फिट, तौल २० किलो !
यहाँ १०० % गर्छु : कमलजुनसुकै क्यान्सरको पनि उपचारराज जोशी, बैद्य